USA,15 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Hogaamiyihii Xukumi Jirey Midowgii Soofiyeeti Vladimir Lenin Ayaa Laga Doodayaa In La Aaso Ka Dib Markii Uu 90 Sano Ku Jirey Quraarad Lagu Daawado.
Lenin ayaa geeriyooday 21 January 1924, waxaana la dhigay meel u dhow fagaaraha red square ee magaalada Moosko si loogu daawado.
Dagaalkii labaad markii Jarmalku ku dhowaaday inuu qabsado magaalada Moosko ayaa loola cararay maydkii Lenin gobolka Siberia, markii Jarmalkii dib loo celiyey ayaa lagu soo celiyey Moosko.
Dadka doonaya in la aaso Lenin ayaa ku doodaya in sagaashan sano ay ku filan tahay in meyd la hayo, iyadoo kharash badana ku baxo ilaalinta jirkiisa oo la mariyo waxyaabo ka ilaaliya inaanu jirkiisu googo'in. Dadka raba inuu maydka Lenin u yaalo ayaa ku doodaya in kharashka ku baxaa ka soo baxo dadka u daawasho yimaada ee dalxiisayaasha ah.
Lenin keligiis kuma aha in la daawado ee waxaa dhiniciisa jiifi jirey mudo 8 sano ah 1953-1961 ninkii isaguna xukumi jirey Midowgii Soofeyeti ee la oran jirey Joseph Stalin, laakiin 1961kii ayuu Khorushoof oo xukumi jirey dalkaas amar ku bixiyey in la aaso Stalin, sababtoo ah dad badan oo nebcaa Stalin darteed.
Waxaa kaloo la daawadaa hogaamiyihii Shiinaha Mao Tse Tung oo geeriyooday 1976, magaalada Hanoi ee Vietnam waxaa isna la daawadaa Ho Chi Minh oo ahaa madaxweynihii Fiyetnaamta woqooyi, dhinaca Kuuriyana waxaa laba quraaradood ku jira oo la daawadaa Kim Il Sung oo Kuuriya xukumayey 50 sano 1945-1994, iyo wiilkiisii oo isna Kuuriya haystay 1994-2011.
Dhamaan nimankaas quraarada ku jira marka laga reebo Lenin inta kale lama hadal hayo aasitaankooda, waxaana laga yaabaa inay boqolaal sanadood sii yaalaan.